July 13, 2021 – Kalfadhi
Madaxweyne Axmed Madoobe oo guddiga doorashooyinka Jubbaland kula dar-daarmay in ay qabtaan doorasho xor iyo xalaal ah
July 13, 2021 Hassan Istiila0 comment
Madaxwaynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa xalay magaalada Kismaayo kula kulmay guddiga hir-galinta doorashooyinka ee Jubbaland. Mudane Axmed ayaa guddiga kula dar-daarmay guddiga in ay qabtaan doorasho xor iyo xalaal ah. Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa dhawaan booqday magaalooyinka Kismaayo iyo Garbahaarey si uu u dar-dargeliyo qabashada doorashada.
Ra’isul Wasaare Rooble oo maanta la kulmay guddiga amniga doorashooyinka iyo taliska AMISOM
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta la kulmay guddiga amniga doorashooyinka, oo isugu jira taliyeyaasha booliiska heer fedaraal iyo heer dowlad goboleed, gobolka Banaadir iyo taliska AMISOM. Ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii loo dar-dargelin lahaa howlaha horyaalla guddiga amniga, isla markaana ay u xaqiijn lahaayeen hannaanka amniga ee doorashada dalka iyo goobaha ay ka dhaceyso. Ra’iisul Wasaaraha ayaa xasuusiyay xubnaha guddiga amniga masuuliyadda adag ee loo xil saaray in ay u gutaan si mas’uuliyadi ku dheehan tahay. Hassan Istiila Mogadishu, Somalia
La kulan: Wasiirka dhallinyarada oo dhallinayarada ku dhiira-gelinaya u tartamida kuraasta baarlamaanka
July 13, 2021 July 13, 2021 Hassan Istiila0 comment
Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamsa Saciid Xamsa, oo ka hadlayay fursada dhallinyarada ee ka qeyb-galka siyaasada dalka, ayaa sheegay in dhallinayarada wali ay heystaan fursad, in kasta oo dalka uu aaday doorasho dadban. Mudane Xamsa oo wareysi gaar ah siiyay Kalfadhi.com, ayaa xusay in dhallinyarada ay u soo tartami karaan kuraasta baarlamaanka federaalka iyo xitaa kuwa maamul-gobolleedyada, ka wasaarad ahaana doorkooda uu yahay dhiira-gellinta iyo garab is-taaga dhallinyarada uu ku jiro hamiga siyaasadda iyo guud ahaan dhallinyarada muwaadiniinta ah. “Annaga mar kasta dhallinyarada ayaan la shaqeynnaa, hormarinaa…